Xayeysiinta Muuqaalka Yaashi ee Gobolka Juqraafi | Martech Zone
Isniintii, September 14, 2015 Isniin, Oktoobar 12, 2015 Douglas Karr
Maaddaama daawashada fiidiyowga ay sii kordheyso, waxaa jira fursad lagu gaaro dhagaystayaal aad u gaar ah iyadoo la adeegsanayo farsamooyin bartilmaameed oo kala duwan. Iyadoo Yaashi, ganacsiyada ayaa dejin kara loolka iyo dhigta saxda ah waxayna jaangoyn karaan gacan ku hareeraysan, iyagoo u fidinaya xayeysiis kaliya dadka deggen aaggaas. Awooda dib-u-habeynta Yashi ayaa sahleysa inaad tusto xayeysiiskaaga dadka horey u soo booqday bartaada.
Yashi wuxuu falanqeeyaa in ka badan 65 bilyan oo muuqaal bishii wuxuuna u oggolaanayaa xayeysiiyayaashu inay si sax ah u helaan mid ka mid ah aragtiyaha ay rabaan inay iibsadaan iyagoo adeegsanaya habab kala duwan oo bartilmaameed ah. Farsamooyinkan waxaa ka mid ah adeegsiga xogta ku saabsan isticmaale kasta:
Ujeedada wax iibsiga
Nooca astaanta muraayadaha indhaha ayaa qortay Yashi si ay ugu adeegto ololaheeda fiidiyowga ah ee 15-ilbiriqsi, kaas oo ku dhiirrigaliyay daawadayaasha inay booqdaan mid ka mid ah xarumaha shirkadda 100 + ee Manhattan. Yashi wuu dhaafey yoolalihi ololaha, isagoo dhaliyey a 80.57% Arag iyada oo loo marayo Heerka (VTR) iyo 0.32% Riix Heerka Qiimeynta (CTR).
Farsamada bartilmaameedka ugu muhiimsan waa geotargeting. Badeecooyin iyo adeegyo badan ayaa leh xuduudo juqraafi ah, laakiin xitaa shirkadaha waddanka oo dhan waxay ka faa'iideysan karaan ololeyaasha juqraafiyeed. Yashi wuxuu awood u siinayaa beegsiga gacan yar oo ku wareegsan hal dukaan, nambarka zip oo dhan, DMA, Gobolka, gobolka, ama waddanka oo dhan.
Warbixinta Yashi waxay u suurta gelineysaa suuqleyda inay ku falanqeeyaan waxqabadka ololaha aag ahaan, iyo adeegsiga muuqaalka Zip Code Lookup sidoo kale wuxuu noqon karaa hab wanaagsan oo lagu baaro waxa tirakoobka dadka ay si fiican uga jawaabayaan.
Tags: xayeysiinta adjuqraafigeolocationraxandhaadheeryashi